ISILO SAMABANDLA NOSIZO EMINDENINI – Sivubela intuthuko Newspaper
ISILO SAMABANDLA NOSIZO EMINDENINI
MAGAYE CELE ISILO Samabandla uMisizulu kaZwelithini sesikhethe ukuba sisebenzisane nezinkampani ezahlukene ngenhlosyo yokulekelela imindeni edla imbuya ngothi yaKwaNongoma namaphethelo. Ingu-2500 imindeni yaKwaNongoma ehlomulile kulolu hlelo lweSilo lokunikezela ngosizo kuyona yonke imindeni edinga usizo kulesi sikhathi esibucayi kangaka. Kuhlalukile ukuthi igilosa yomndeni ngamunye ibibIza inani lika-R1200. Futhi kuvelile nokuthi imali esetshenziselwe ukufeza lo msebenzi ifinyelela ku-R3million okuyimali enkulu kakhulu. Lokhu iSilo sikwenze ngesikhathi sethula ngokusemthethweni uhlelo lwaso lokunakekela abantulayo. Besikade sisesigodlweni Kwadlamahlahla khona KwaNongoma. ISilo Smabandla, uMisizulu kaZwelithini uchaze lolu hlelo njengolomqoka kakhulu. Uthe kumqoka ukuba kubekwe eqhulwini ngaso sonke isikhathi ukubhekelelwa kwezidingo zabantu abantulayo. Sithe: “Kulo mphakathi baningi kakhulu abantu ababhekene nendlala ikakhulukazi kulesi sikhathi esinzima kakhulu esibhekene naso sokungabibikho kwamathuba omsebenzi. Njengoba kuhlasele neCorona nje miningI kakhulu nje impela imindeni yakule ndawo edinga ukubhekelelwa ukuze nayo ikwazi ukuthola okuya ngasethunjini.’’ Siqhuba iSilo sithe siyajabula kakhulu ngalolu hlelo nangale gilosa enikezwe imindeni yakule ndawo. Uthe okuhle kakhulu ukuthi okungenani izokwazi ukuthi iqhube imindeni kuze kuphele inyanga golokoqo okuyinto athe inhle kakhulu. Siqhuba sibonge kakhulu kubona bonke abafake isandla ukuze luphumelele kalula uhlelo lokunikezela ngosizo lwamagilosa emindenini yaKwaNongoma. Sithe ukusebenzisana yikhona kanye okudingekayo manje ukuze iNingizimu Afrika izobonakala iba sizosebenzisana kakhulu n ISILO Samabandla uMisizulu kaZwelithini obekade enohlelo lokubuyisela emphakathini
ISILO Samabandla uMisizulu kaZwelithini sesikhethe ukuba sisebenzisane nezinkampani ezahlukene ngenhlosyo yokulekelela imindeni edla imbuya ngothi yaKwaNongoma namaphethelo.
Ingu-2500 imindeni yaKwaNongoma ehlomulile kulolu hlelo lweSilo lokunikezela ngosizo kuyona yonke imindeni edinga usizo kulesi sikhathi esibucayi kangaka.
Kuhlalukile ukuthi igilosa yomndeni ngamunye ibibIza inani lika-R1200. Futhi kuvelile nokuthi imali esetshenziselwe ukufeza lo msebenzi ifinyelela ku-R3million okuyimali enkulu kakhulu.
Lokhu iSilo sikwenze ngesikhathi sethula ngokusemthethweni uhlelo lwaso lokunakekela abantulayo. Besikade sisesigodlweni Kwadlamahlahla khona KwaNongoma.
ISilo Smabandla, uMisizulu kaZwelithini uchaze lolu hlelo njengolomqoka kakhulu. Uthe kumqoka ukuba kubekwe eqhulwini ngaso sonke isikhathi ukubhekelelwa kwezidingo zabantu abantulayo.
Sithe: “Kulo mphakathi baningi kakhulu abantu ababhekene nendlala ikakhulukazi kulesi sikhathi esinzima kakhulu esibhekene naso sokungabibikho kwamathuba omsebenzi. Njengoba kuhlasele neCorona nje miningI kakhulu nje impela imindeni yakule ndawo edinga ukubhekelelwa ukuze nayo ikwazi ukuthola okuya ngasethunjini.’’
Siqhuba iSilo sithe siyajabula kakhulu ngalolu hlelo nangale gilosa enikezwe imindeni yakule ndawo. Uthe okuhle kakhulu ukuthi okungenani izokwazi ukuthi iqhube imindeni kuze kuphele inyanga golokoqo okuyinto athe inhle kakhulu.
Siqhuba sibonge kakhulu kubona bonke abafake isandla ukuze luphumelele kalula uhlelo lokunikezela ngosizo lwamagilosa emindenini yaKwaNongoma.
Sithe ukusebenzisana yikhona kanye okudingekayo manje ukuze iNingizimu Afrika izobonakala iba nenqubekela phambili futhi ikwazi nokulwa nobubha emiphakathini yasemakhaya.
Sithembise ukuthi sizosebenzisana kakhulu nendlovukazi ukaMayisela ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi liyafezeka iphupho laso lokulekelela abampofu bakule ndawo okuyinto athe uyibona umqoka kakhulu kuyena.
ISilo sibe sesisebenzisa leli thuba ukuba likhuze labo ababephambili ngesikhathi kutatshwa izitolo futhi zishiswa. Sithe lokhu akukuhle futhi akwamukelekile ngoba kuqeda imisebenzi evele ibonakala imincane kakhulu kulesi sikhathi samanje.
KUHLONGOZWA UKUTAKULA OSOMABHZINISI ABAKHAHLAMEZEKILE KWADUKUZA